मनै कुत्कुत्याउने मंसिरको बिहे ! -
प्रकाशित मिति :२०७७ मंसिर १३, शनिबार
अनुमानित पढ्न लाग्ने समय :3मिनेट
कोरोनाले गर्नु गर्यो, ६/७ महिनासम्म घरभित्रै बस्नुपर्यो । बाहिर घुमफिर र रमाइलोमा निस्कनु त परको कुरा, घरभित्रै श्रीमान-श्रीमतीसमेत सँगै बस्न डराउनुपर्ने अवस्था आयो । यसबीचमा बिहे गर्ने कतिका इच्छा रोकियो । नवविवाहित र सबैखाले जोडीहरुका मनभित्रको रहर मेटियो ।
टाइसुट, साडी-ब्लाउज, लेहंगा ढल्काएर जन्त जान पाइएन । दाइकी साली हेर्न पाइएन । दिदीको देवर देख्न पाइएन । पाटीप्यालेसमा मिठोमसिनो चाख्न पाइएन । निकै कष्टपूर्ण भए बितेका यी दिन । दशैँ, तिहार र छठसँगै अप्ठ्यारो र अत्यासलाग्दो अवस्था बिस्तारै कम हुन थालेको छ । मान्छेलाई कोरोनाले नछोडे पनि कोरोनालाई मान्छेले वास्ता गर्न छाडेका छन् । मंसिर लागेपछि त झन् बिहेको तामझामले कोरोनालाई छायाँमा पारेको छ ।
बितेका वर्षहरुमा पनि अरु महिनाभन्दा मंसिर रमाइलो र विशेष हुन्थ्यो । किनकी असारपछि एकैपटक मंसिरमा बिहेको लगन हुन्छ । हुन त हिजोआज कात्तिकमा पनि मान्छेले बिहे गर्छन् । तर कात्तिकको बिहे नवविवाहित जोडीलाई मात्र रमाइलो लाग्छ, अरुलाई त कात्तिके बिहे, के रमाइलो लागोस् !
मंसिरको बिहे सबैभन्दा रमाइलो ! मंसीरे विहे जोडी बाँध्नेलाई मात्र होइन, जोडी खोज्ने, जोडी देख्ने र जोडी मन नपर्नेलाई समेत रमाइलो लाग्छ । भर्खर बिहे भएका र हुन लागेका जोडीलाई त त्यसै पनि रमाइलो हुने नै भयो । बल्लबल्ल मनले आँटेअनुसार पुगेको छ । आफैंले ल मेरो बिहे गरिदेउ भनेर फ्याट्ट भन्न नमिल्ने । तर उमेर पुगेका छोराछोरीले मुख फोर्न नसकेको कुरा बाआमाले थाहा पाइहाल्छन् ।
दसैँतिरै बाआमाले ल यसपाली त बिहे गर्नुपर्छ, तेरो आफ्नो भए भन्, नभए हामी खोजी दिन्छौं भनेपछि मनमा काउकुती लाग्न थाल्छ । काउकुती बढ्दै र कुरो चल्दै गएपछि धेरैको मंसिरमै जोडी बाँध्ने टुंगो लाग्छ । अनि हत्तपत्त फेसबुक, टिकटक र इन्स्ट्राग्रामको प्रोफाइल, पासवर्ड, स्टाटस र फोटो डिलिट गरेर जोडाजोडी पुराना सम्बन्धलाई डस्टवीनमा फ्याकेर ती स्थानहरु नयाँ मुस्कान र प्रेम सहितका स्टाटस र फोटाले भर्न थाल्छन् ।
बिहेको बन्धन कति कसिलो र असजिलो हुन्छ भन्ने कुरो अहिल्यै के थाहा ! बिहेको कुरा चलेदेखि बिहे भएको दुई चार दिनसम्म त कमिलाले चिनी भेटेजस्तो माया पनि चास्नीमय हुन्छ, जोडाजोडीलाई संसार नै जितेजस्तो रमाइलो भैहाल्छ ।
मंसिरमा बाँधिएका नयाँ जोडी मात्र होइन, जोडी मिलाइदिने लमीदेखि निम्तालु पनि दंग पर्छन् । पण्डित पुरोहितको लागि त गोजी र झोली भर्ने सुनौलो मौका नै हो मंसीर । निम्तालुलाई पनि भ्याईनभ्याई हुन्छ । एकै दिन चारतिरबाट निम्ता आउँछ । कसकोमा मात्रै जाने, कसकोमा मात्रै खाने !
सबैले एकैदिन नजुधाएको भए पनि दिनहुँ पालैपालो मासु र भात खान पाइन्थ्यो । तर एकातिर पेटभरी भोज खाएर अर्कोतिर निम्ता मान्न पुग्नुपर्छ । घरका सबैलाई सबैतिर भाग लगाउँदा पनि दोहोर्याएर नै जानुपर्ने गरी निम्ता आउँछ । घरका सबै काम छाडेर निम्ता मान्दै हिँड्नु पनि रमाइलै कुरा हो । त्यसमाथि बिहेमा जानुछ भनेपछि कर्मचारीले पनि सुख पाउँछन् । कार्यालयमा हाजिर गरेर दिनभर बिहेभोजमा भुल्न पाइन्छ । कर्मचारीलाई पनि रमाइलै हुने भयो।
पहिल्यै बिहे गरेर छोराछोरीको बाउआमा मात्र होइन, नातिनातिनाका हजुरबा हजुरआमा भैसकेकाहरुलाई पनि मंसिर महिना असाध्यै रमाइलो हुने रहेछ । नपत्याए फेसबुक हेर्नुहोस्, फेसबुकमा नयाँ जोडीकाभन्दा पुराना जोडीहरुका फोटो धेरै देखिन्छ ।
उबेला आजकै दिन, हामी एक भएको क्षण भनेर पुराना जोडीहरुले फोटो राखेका हुन्छन् । फोटो देखेपछि लाइक र कमेन्ट गर्नु तपाईं हाम्रो काम हो । नत्र आफ्नो पालामा लाइक र कमेन्ट फिर्ता आउँदैन । पुरानो फोटोमा नयाँ लाइक र कमेन्ट देखेपछि पुराना जोडीहरुको मन पनि फुरुंग हुन्छ ।
बिहे नभएका ठिटाठिटीलाई चाहिँ के रमाइलो भन्नुहोला ! उनीहरुलाई त झन् रमाइलो । घरमा बिहेको कुरा चल्दा पनि रमाइलो । साथीभाइहरुले जिस्क्याउँदा पनि रमाइलो । फेसबुकमा मंसिर पनि त्यसै जान लाग्यो भनेर स्टाटस राख्दा रमाइलो । मंसिर लाग्यो, के छ विचार भनेर च्याट गर्दा पनि रमाइलो । त्यसमाथि घरमा थरीथरीका मान्छेले थरीथरीका कुरा लिएर आउँछन् ।
आफ्नो लागि जोडी बाँध्ने कुरा हुँदैछ भन्ने सुन्दा नै कति हो कति रमाइलो । अझ हुनेवाला वा हुन खोजेको जोडीसँग लजाई लजाई हेर्दा र लुकीलुकी भेटघाट गर्दा झनै रमाइलो । यो त मन परेन, अर्कै खोज्नुहोस् भनेर रोजीछाडी जोडी भेट्दै हिँड्नु त अझै रमाइलो । जोडी मिलेर बिहे मंसिरमै बिहे भैहाल्यो भने त झन् तन मन दुबै रमाइलो ! भएन भने पनि अबका बाँकी दिन, महिना र बर्षभरि नै छानी छानी जोडी हेर्न, लजाउन, जिस्क्याउन र जिस्किन तथा बिहे गर्न पाईने कुरा सम्झदा झन् रमाइलो ।
किनकि पुसको अन्तिम हुन थालेदेखि फेरि बिहेकै कुरा हुन थाल्छ । मंसिरमै बिहे भैहाल्यो भने पुसको अन्तिमसम्ममा त रमाइलो पनि सकिन्छ । बिहे नभएमा त अहिलेकै रमाइलो फेरि दोहोर्याउन पाइन्छ । त्यसैले बिहे नभएकालाई झनै रमाइलो ।
बिहे हुन लागेका, भर्खर बिहे भएका र पहिल्यै बिहे भएर ‘एनिभर्सरी’ मनाउनेलाई मंसिर महिना उल्कै रमाइलो । नयाँ जोडी खोजिदिने, बिहे गरिदिने र बिहेको निम्तो मान्न जानेलाई पनि उत्तिकै रमाइलो । यसपालि चैतदेखि कहीँ कतै घुमफिर, हिँडडुल र भोजभतेरमा जान नपाएकालाई त मंसिर झन् बढी रमाइलो ।
यो लेख उज्यालो अनलाईनमा मिलन तिमिल्सिनाले लेख्नुभएको छ । हामीले यो साभार गरेका हौँ ।
धरहराको उद्घाटन वैशाख ११ मा गरिने
दुप्चेश्वरमा आयोजित राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगितामा जे देखियो (फोटो फिचर)